Okpu okpu agha n’azụ igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ihe ngosi nke nsogbu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okpu agha n'azụ ihe ịrịba ama nke ọgba tum tum - olee otu i si ekpebi
Okpu agha n'azụ ihe ịrịba ama nke ọgba tum tum - olee otu i si ekpebi
Okpu okpu agha n’azụ igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ihe ngosi nke nsogbu?
Naokpu aghan'elu ala anabatara ya dikamgbaàmà nsogbu. Agbanyeghi na nuru na ikwesiri idowe ya n ’ebe ukwuigwe kwụ otu ebeiji mee ka ndị mmadụ mata na ọ bụghị naanị itinye ya n'akụkụ gị maka ezumike.13.09.2012
Kedu ihe ịrịba ama ụwa niile maka igwe kwụ otu ebe nọ na nsogbu?
okpu agha n'azụ
Enwere m olileanya na ihe nzuzu a anaghị arụ ọrụ n'ihi na m nwere nsogbu nsogbu a niile ọzọ ebe m nwetara ya na ọnọdụ na-ezighi ezi, yabụ ọ bụ ụbọchị mara mma, ọ bụ ụlọ ọzọ kwesịrị ekwesị Blake na achọrọ m, yabụ m n'ezie na-agbalị ihe mara mma ọhụrụ. Aga m egwu egwu ma dekọọ vlog ahụ ma ọ bụ ụfọdụ ndị na - ala azụ kpọrọ ha v log kwuru maka ya yabụ amaghị m ma ọ ga - abụ gị ị nwere ike ịnụ ya, m ga - agbanye olu obere ntakịrị ka m wee mara na m ga-amalite iti mkpu ma na-amasịkarị m ndị na-abịakwute m dị ka ekele maka igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ihe ọ bụla na enweghị m ike ịnụ ha n'ihi na ha Egwu ahụ dị oke oke ma enwere m earplugs na m buds ya mere enwere m ike n'ezie anula ya ka m gha aputa olu obere obere ma achota onye ozo choro inu egwu nzuzu azo ozo ma ee e ee, ka anyi lee ka anyi ga eme nke a ka anyi mee gbalịa ka anyị hụ ka nke a si pụta otu abụọ otu abụọ atọ atọ anọ yana dịka m na-agbanye mgbe niile na m na-agbanye plọg ahụ, etinye m ya n'akpa azụ m wee kwụsị ihe niile ahụ, ọ dị mma ka anyị mee nke ahụ Motorbike na akpa njem amalite , ee ee, ọ ka mma ugbu a, enwere m ike ịmasị ihe gị, echere m na anyị ga-ahụ, anyị ga-ahụ ole m ga-anụ, m ga-akụpịa sịga m, sị mgbe onye ọ bụla nwere obere bea, ọ dị ka Mel tupu m nwee uwe m, nke ahụ dị ka nke anyị oh, ọ na-enwe ihe ọghọm, enwere m ihe ọghọm mgbe m nwetara ọrịa ahụ, ihe niile m mere bụ ijide ebe a na ihe niile m mere bụ ịgbanye ya. na-ele anya na ihe niile m mebiri, ee na mgbe m tụgharịrị ka m hụ onye m gbalịrị ịgbanwu ịghaghachi na enweghị m ike ịtụgharị isi m enwere m ihe ịtụnanya 15-25 enweghị m ka ị hụ ihe niile na - eme, ị nwere ihe ọhụụ karịa n’eziokwu m ga - asị na ị nwere ọtụtụ visibiliti na igwe kwụ otu ebe karịa na carb n’ihi na enwere m ike ịhụ gị m ga - ahụ gị na ị maara nke ọma ogo 1 80, ị maara nke ọma nke ukwuu site n’ebe dị anya ekpe aka ekpe aka ekpe, imara na ihe di nma banyere otu ihe di nma m chere na i nwere ike ile anya, ima, dika odighi mgbe m nwere mgbanwe ma o buru na i mara na inwere ike ime ya? lee nnụnụ na osisi ma lee ị maara na ọ ga - abụ nwayọ ị ga - anụ isi nwa okorobịa ahụ na - ekwu na ndị omempụ na - abụ abụ rapas na - ekwu na ha bụ ndị ọjọọ na - enweghị nsogbu dị ka ndị a na - echegbu onwe ha ndị na - abụghị 16 afọ anyị gbalịrị ịkọwa nke a bụ ajọ ndị omempụ Nke ahụ anyị na-anwa ịbụ ndị na-eri nri, ị maara, nke ahụ bụ obere iyi na ọ bụ ya bụ mgbe m ga - akwụsị inwe mmasị ma ọ bụ enweghị mmasị na anaghị m amasị nke a kama ịkwụsị ịnụ ma ọ bụ ịnụ ya, ọ na - adị m ka m bụ onye eziokwu, m Ọ na-amasị m ime ya dị ka ịdọ aka na ntị rap dị ka friggin nke atọ base na vanilla ice cream ị maara na ọ bụ ihe dị egwu goofy anyị nwere 16chocolatelaughterholkham ọgụ anyị bụ obere bitget gold putwar a mma ụbọchị m lere anya dị ka m na-apụ, ma eleghị anya ị ga-ezute onye ị maara onye na-esi nri maka igwe kwụ otu ebe ebe anaghị m enwe ntụzi, ọ bụ naanị onye na-eme njem L na-agagharị na South Chair na-achọ nsogbu na-achọ ndị na-agba ọsọ na cocaine goal, yabụ , Amaghi m onye odi nma na edemede m? enwere ike ịgbatị oge a karịa 15 nkeji oh, agaghị m akwụsị teepu a, m ga-aga n'ihu ruo mgbe m kụrụ ọkụ na-acha uhie uhie ma m ga-ekwu okwu banyere onye na-eji olu ọma ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ na-atụgharị ee ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ skuuta oge ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na-eche spry na ị na-atọ ọchị, o kwesịrị ifegharị ya n'ihi na karịsịa na usa dị ka m13, ee taiwan nọ na taiwan na ọ nso nso a wepụtara otu isiokwu na isi kwuru na taiwan dị ka isi obodo ụwa nke ịnwụ na ọgba tum tum dị ka O yikarịrị ka ị ga-eme A ga-egbu gị na ọgba tum tum na Taiwan karịa ebe ọ bụla ọzọ ị maara na eziokwu ahụ bụ na, mana agbanyeghị meta nke na-enyere mpaghara ọnụ ọgụgụ aka, ị ga-abụ pasent nke ihe merenụ ma ọ bụ ihe mberede metụtara na ọgba tum tum ma ọ bụ ụgbọ ala na otu ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ , ma nke a bụ nanị ihe ngosipụta nke ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala nke ụdị na-na Street, nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-ebi na mba m ga-asị ka anyị were United States, ma ọ bụrụ na ị na-ebi na steeti na ọ bụ nanị otu isi mara na amaghị m, Aga m adụ ọdụ ma tụfuo dịka Iowa ma ọ bụ Nebraska ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ihi na anaghị m apụ ebe ahụ kama ana m eche na enweghi ọtụtụ ọgba tum tum mana onye maara na nke ahụ nwere ike bụrụ ihe na-ezighi ezi, mana m na-ewere steeti ọ bụla na kwuo na steeti nwere ngụkọta mmadụ iri na-anya ọgba tum tum, yabụ ka anyị kwuo maka ndị ọgba tum tum iri a otu afọ, ọbụlagodi n'ime ha merụrụ ahụ ma ọ bụ gbuo ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọgba tum tum ahụ ma ọ bụ 44 Ya mere iwu ọgba tum tum na-ekwu na pasent iri asaa nke mpaghara a ma ọ bụ Sarah pasent iri asatọ nke ahụ Mpaghara di na ọgba tum tum merụrụ ahụ ma ọ bụ gbuo Naanị mmadụ asaa ka m gburu na-echeghị na Taiwan nwere oke mmerụ ahụ ma ọ bụ igbu ọchụ ma ọ bụ ọnwụ n'ihi na, ehee, enwere ọtụtụ mmadụ, echere m na e nwere ndị ọzọ bt echere m na ọ na-agwa nke ahụ ha nwere mmerụ ọgba tum tum ma ọ bụ ọnwụ karịa n'ihi ọgba tum tum ndị ahụ na-adịghị mma, ị maara? nke ozo gosiputara gi otu igaghi ewere ikike gi dika ihe nzuzu, imara na igha ime ihe omuma gi ma jide n'aka na inyinya ibu gi apughi igbu ya ebe a, mana ee ka ikwesiri ikele nke mbu mkparịta ụka ị na-kwes supposedr to mkpọrọhịhị ka a ife hello ị na-ama ebe a na south jersey ọ bụ ụdị dị ka ibe dị ka a ị maara etu ị si eme ihe ị maara na ị nwere ike ịkwanye aka ma nwee cheesy ị maara mana ị maara ma ọ bụrụ eme ya mgbe ị ga-enwe ipigide ọrụ, na-emekarị dị ka nke ahụ, na agbanyeghị otú i nwere a onye nke anọ dị mkpa nke na-ekpe n'aka dị ka Kacha ọhụrụ kpọmkwem ụzọ m na-agbalị mgbe niile na-anọ na ri nri maka ụzọ ọzọ ihe ọ bụla ga-eti m dị ka gị ee m na-ekwu na ọ bụ naanị ihe m na-eme ka m ga-adị nchebe ị maara na ị nwere ike ịzọpụta na ị ga-eji aka gị rụọ ọrụ aka gị na ekwentị ahụ dị ka nke ọma na-echebekwa karama akụkọ ahụ na ụdị ụfọdụ nke ihe niile n'ihi na ị adịghị 'wanna achoro idebe ya n'ihi na ige nti, gi mara, achọla mhie ụzọ m bụ n'ụzọ nkịtị na ndụ m mana n'azụ gị ịmara nke mbụ ị chọrọ ịhụ na ọ nweghị ihe ndọta siri ike na-akwa emo maka mkpokọta styrofoam nke ahụ bụ ihe nzuzu dị ka nwoke ma ọ bụ nnukwu karama ọ dị ka ihe nwere lita bụ ihe jọgburu onwe ya dịka a ga - asị na anaghị m achọ otu esemokwu, ọ bụ ezie na ọ ga - amasị m ịkụ aka - ọ bụ ya mere anyị ji bịa ebe a Ohoki dị ka onye na - eme egwuregwu na - eme egwuregwu a mgbe niile 80s wow, nwoke ahụ na-ese anyị ebe, nke ahụ ọbụnadị iyuzucha nke ekwuru na ike gwụrụ, ee, ee, breeki gị na-ese anwụrụ ee madam oh ee onye na-ekpo ọkụ na-ere ọkụ nke ahụ mere ị ji chọọ mmezi mgbochi ọ ga - eme ka m kwụsị n'akụkụ ya ọ na-achọ ọkụ wee sị ee kpamkpam ee dị ka m kwuru na di na nwunye nke isiokwu ndị ọzọ m na-anọrọ ịnọ n'aka ekpe n'okporo ụzọ ebe a, ihe ọ bụla ụzọ aka ekpe ga-abụ, ọ bụrụ na m nọ n'ụzọ ziri ezi m ga-anọ n'etiti ngwụrọ a dịka a ga - asị na m nọ ọtụtụ awa n’azụ ụgbọala a na - acha ọcha ga - anọ n’etiti uzo n'ihi na nke ahu ga - eme ka o kwe omume iti ihe mgbari m ebe a ka ha wee nwee ya n’azu m ma na m aghaghi nkenke ka m wee nwee ike ma oburu na mmadu puo n’otu n’ime uzo ndi ahu, nwere ikike igbanwe na otu Ntuziaka ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụ kwụsị ma gbaa ha gburugburu, enwere m ike ịhụ ha nke ọma ma agaghị ekwe ka ụgbọ ala dị n'okporo ụzọ ahụ, ụgbọ ala abụọ n'okporo ụzọ ahụ ga-agbagharị n'okporo ụzọ ziri ezi ma enwere m oge iji mee ka ị mara mgbe nke kachasị mma bụ idobe anya gị mgbe ị na - agagharị mgbe ị na - azụ ahịa dị ka oge anwụ a na - agbada n'ụsọ oké osimiri Jersey ị maara na desha lb agaghị ekwe ka ikpochapu oke ma, ma, ha nwere ụda dị iche na ha na - ada ụda. Don't naghị anụcha ihe na-ekpo ọkụ, ị na-anụ njin ị maara ma ị chọghị ịchọrọ crank engine gị oge ọ bụla naanị n'ihi na ịchọrọ ka a nụ gị, dị ka onye ọzọ n'ime gị na-atụgharị n'ime gị ma ọ bụ ihe ọ bụla, yabụ aga m agbali ma kwusi ebe a ngwa ngwa ma oburu na m nwere ike ma kwusi teepu ma bido mr ohuru. lee ka ị na-ekwu
Gịnị ka okpu igwe kwụ otu ebe n’elu ala pụtara?
Okpu agha n'azụigwe kwụ otu ebebụihe omuma nke uwa nile na Nsogbu....09.09.2015
kwesịrị ịgba ndị na-agba ịnyịnya agha ikpu okpu agha, ọ bụ isiokwu a na-ekwe nkwa iji kpalite ọgụ Onye ọ bụla nwere echiche. Nsogbu bụ na ha anaghị adabere na ihe akaebe Ka anyị bido site na ihe dị mfe Enweghị m nsogbu na okpu igwe mgbe m 'm na-agba ịnyịnya ígwè, M na-emekarị eyi otu mgbe m daa apụ m igwe kwụ otu ebe na m okpu agha na-ekwesị ruo eruo na m na-agba na ihe na ala na-agba. Ihe akaebe na-egosi na ịmanye ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka ha kpu okpu agha ga-enyere m aka ebe ọ malitere ịmalite mgbagwoju anya. Nke mbu, ka anyi nuru site na dibia nke metutara isi ya n’ahu n’afọ gara aga. M gbara ịnyịnya ígwè gafee Amerịka, enyo ugo gwongworo gwuru m n’azụ isi m na 70 mph, kụtuo m n’ịgba ịnyịnya ígwè m wee gaa n’okporo ámá, mana m enwere m Kechioma m yi okpu agha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị m ka m ga-anwụ na budata belata n'ike-n'ike n'ihi ya, ọ bụ mara mma Clear okpu agha nwere ike ịzọpụta ndụ, ma ugbu a, ka anyị nụrụ site na dọkịta ọzọ na ọ bụghị naanị maka ndị mmadụ mana ahụ ike ndị mmadụ n’ozuzu ha na-ele ezigbo anya na-egosi na ịkpu okpu igwe n’adịchaghị mma n’anya ndị mmadụ ma nwee ike belata oge ole ha na-agba okirikiri, enwerekwa ọtụtụ ihe akaebe na uru ahụike nke ịgba ịnyịnya karịrị akarị ahụ ike.
Ọzọkwa, ịgba ịnyịnya ibu adịghị ize ndụ dị ka ndị mmadụ chere na e nwere otu ọnwụ na UK maka ihe dịka 30 nde kilomita nke ịgba ịnyịnya ígwè, nke ahụ bụ ihe dị ka otu narị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-egbu kwa afọ, n'eziokwu ọ na-ekwu 'njem mbụ, mana ọ nwụrụ n'ime N'otu afọ, ihe karịrị mmadụ 85,000 malitere n'oge na-adịghị anya ọrịa ndị anaghị ebi ndụ na-akpata - ọtụtụ ihe dịka ọrịa obi, ọrịa shuga na ọrịa kansa na ndị a bụ ọrịa ndị ahụ. Gba ịnyịnya ígwè nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ na mgbochi. Cgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji lụ ọgụ ịnyịnya ígwè dị ka akụkụ nke okporo ụzọ dịka akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị pụtara na ndị mmadụ na-emega ahụ oge niile. Ọ bụghị ihe ha ga-aga mgbatị ahụ - ha nwere ike ime ya - ọ na-amasị ha ịrụ ọrụ na ya, ịgagharị n'ụlọ ahịa, wdg.
Cingmanye iyi okpu igwe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ mere ka ịgba ịnyịnya ígwè dị nchebe, ọ ka ga-abụ ọnụ ahịa zuru oke na ọha na-eduga ahụike na ihe ọzọ na-eme mgbe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-etinye ihe mkpuchi nke yiri ka ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịdị anyị Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya ụgwọ ụgwọ. N’ụzọ bụ isi, mgbe inwere nchebe karịa, ị na-etinyekarị ihe egwu. Ee anyị nwere ndị mmadụ na ụlọ nyocha ma anyị na-agwa ha na anyị ga-eleba anya na mkpebi mgbe ha nwere ngwaọrụ nyocha na okpu agha ha wee mee mkpebi dị iche iche na-arụ ọrụ na ọrụ ịgba chaa chaa ma anyị chọpụtara na ndị e nyere okpu agha dị na ọrụ ịgba chaa chaa emeela ihe ize ndụ dị ukwuu ma yie ka ọ na-egosi nyocha ndị dị egwu, yabụ ndị edemede yiri ka ha na-eji nchebe a eme ihe karịa ka ọ bụrụ ihe na-enweghị isi ebe ọ na-atụ ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ egwu karịa ka ha na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na nnwale ọzọ bụ Ian na a igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ na a mita mgbe ụfọdụ ọ na-eyi a okpu agha mgbe ụfọdụ na ọ hụrụ na mgbe yi okpu agha ahụ na okporo ụzọ na nkezi na-eru nso, mgbe ụfọdụ dị ize ndụ, n'ihi ya, anyị nwere abụọ kwere omume nkọwa na ọ nwere ike ịbụ ihe na-adịrị gị mfe na a okpu agha leghaara anya na al s Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ na mmeghachi omume nke nkọwa ndị ọzọ nwere ike ịpụta bụ na Glamour chere na echedoro ya ma nwee ike itinye ihe egwu.
Yabụ kedu ihe mere mgbe mba mebere okpu igwe anyị chọrọ? okpu agha ha na-emechi ya enweghị ihe akaebe na ha na-eji waya eme nke a. Ọtụtụ ndị ọkachamara igwe kwụ otu ebe na-ewe iwe nke ukwuu mgbe mkpọsa nchekwa igwe kwụ otu ebe dabere na okpu agha. Azụ a isụ na-abụ naanị iyi okpu igwe igwe mgbe ọ bụla ị nwere eriri, ọ bụghị ụmụaka bụ nke gị okpu agha ji nganga yi ụfọdụ n'ime nkụda mmụọ ndị ahụ karịa ọtụtụ bụ ChrisBoardman onye bụbu onye mmeri n'egwuregwu Olympic na-aghọ onye na-agba ịnyịnya ígwè Helmet nkewasị isiokwu ha na-abụkarị mmeghachi omume nke ndị mmadụ na gburugburu ebe m na-eche na enweghị enyemaka Enweghị ihe m nwere ike ime. nke ahụ dị ize ndụ Ọ dị mkpa ịgbanwe Dutch nọrọ afọ 40 na-arụ ụlọ igwe kwụ otu ebe dị mma ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-agba ịnyịnya agha, mana na ịgba ịnyịnya na Netherlands dị ihe dị ka okpukpu anọ dị ka nchekwa dị ka ụzọ UK ị maara, ị na-ewe ụzọ mkpirisi. n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya mmasị r niile ụzọ ọrụ bụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu n'etiti motorists.
Yabụ ọ bụrụ na a manye onye ọ bụla iyi okpu agha mgbe ahụ ekele maka ikiri, ka anyị mara ihe ị chere na ihe ndị a n'okpuru, lelee isiokwu ndị ọzọ na edemede ahụ wee hụ na ịdenye aha maka ihe ndị ọzọ
Ọ bụ ihu ọjọọ itinye okpu agha n’ala?
Ọ bụrụ na ị na-anọgide na-dị nnọọ dobe gịokpu agha, enwere ike inwe ohere ị nwere ike ibibi ya. Na mebiri emebiokpu aghabụ ihe na-abaghị uruokpu agha. N'ụzọ doro anya, ọ baghị uru n 'ụsọ ọdịda ahụ. Ọ bụrụ na ịhapụ ya, ị dochie ya, n'ihi na a na-atụle yakeihuoma.12.03.2018
10 N'ime upidzọ nzuzu ndị mmadụ si nwụọ n'ezie Gịnị Na-eme Ọnwụ Nzuzo? Ọ bụ ihe na-amaghị nke ọma? Ka ọ bụ naanị akara ọjọọ nke chi ọjọọ? Ọnwụ ga-abụ nchikota nke ọdachi, ihe na-atọ ọchị na nke a na-adịghị ahụkebe. Ọnwụ ụfọdụ na-eme ozugbo, ndị nke na-eju gị anya. Ọnwụ ndị a nwekwara ike ịghọta ma ọ bụrụ na ha enweghị nzuzu.
Olee kpam kpam, nzuzu nzuzu. Ọnwụ ndị a na-eme n'ihi na ndị mmadụ anaghị akpachapụ anya ma ọ bụ na ị ma ụma tinye onwe gị n'ọnọdụ ndị dị egwu. Hey ụmụ okorobịa, nabatanụ na nsonye ọzọ nke Mụrụnụ.
N’isiokwu nke taa, anyị ga-elele ụzọ iri kacha nzuzu ndị mmadụ jiri nwụọ. Echefula ịpị bọtịnụ dị ka ma denye aha na ọwa anyị ma ọ bụrụ na i nwebeghị! Ọ dị mma, ka anyị banye na
Number 10 - bombu Selfie Enwere ụfọdụ ihe ị na - ekwesịghị ọgbaghara, otu ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe mgbawa dị egwu. Menmụ nwoke abụọ na-eme njem na Russia mgbe ha hụrụ bọmbụ dị ndụ; a tụrụ grenade ahụ na mberede na ọnọdụ a, nke pụtara na ogbunigwe ahụ nwere ngwa ọgụ ma nwee ike ịgbawa ngwa ngwa. Ihe mere na ọ bụghị gbawara ugbua bụ a usoro malfunction; N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị nchekwa iji bulie ya.
Mụ nwoke abụọ ahụ amaghị nke ahụ; Ha chere na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya iburu grenade ahụ were onwe gị. N’ezie, grenade ahụ gbawara n’etiti oge foto ahụ, mana ọ bụ eziokwu, n’agbanyeghi na ụmụ nwoke nwụrụ, ekwentị n’adịghị anwụ ma jiri ya mere ihe akaebe nke ụmụ nwoke ahụ nwụrụ. Ọtụtụ mmadụ na-eji egbe ha na ngwa ọgụ ndị ọzọ ebupute foto, ha na-eche na ọ bụ ihe dị jụụ, mana ọ nwere ike ịfu ndụ ha.
Nọmba nke 9 - Michael Godwin Egburu ya mbụ, mana mgbe mgbanwe nke ikpe ya bịara wee maa ya ikpe ịga nga mkpụrụ ọka, mgbanwe obi ụtọ, ma ọ bụ opekata mpe ọ gaara adị. Ndụ n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ ya dị mma ruo otu ụbọchị ọ chọpụtara na telivishọn o nwere na ya anaghị arụ ọrụ. Ọ nyochara ma mesịa chọpụta na ọ bụ waya lousy; Mgbe ọ lechara ọnọdụ ahụ anya, ọ chere na ihe kacha mma ọ ga-eme bụ iji waya ya wapụ waya ahụ, n’ọtụtụ ụzọ enweghị ọgụgụ isi.
Nke kacha nta n’ime ya bụ waya dị ndụ, o jupụtakwara n’ọkụ eletrik, n’ihi ya kwa, e mere ka ọ banye n’ọkụ eletrik. Ma na nyocha, nke ahụ abụghị njedebe nke akụkọ ahụ. Ma enwere ohere ọ gaghị etinye ya n'ọkụ eletrik site na waya dị ndụ.
Ma ndozi o mere site na mposi nke igwe mere ka ike nke ọkụ eletrik nke gburu ya dịkwuo elu. Ọnụọgụ nke 8 - Notzọ A Na-agaghị Achụpụ A Withụ Na 2002 N'afọ 2002, otu onye ọrụ ugbo nọ na Brazil jere n'ụlọ ya wee hụ nnukwu ụlọ ahiụ dị na ya. Chere. Aesụ nwere ike ịdị oke egwu ma nwee ike ịnwụ.
N'ihi ya, ọ dị mkpa ịkpachara anya, o mekwara nke ahụ. Nwoke a matara na o choro nchebe site na nsị aesụ ya wee jiri ọkụ wepu ebe a beeụ, nke bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bara ọkụ maka a theụ, mana echiche ya banyere ịgbachitere onwe ya bụ itinye akpa rọba n'isi ya wee mechie ya t n'uko ụlọ.
Nsogbu dị ebe a bụ, akpa rọba agaghị akwụsị ọnya a beeụ, nwoke a adịchaghịkwa ama. Mana ọ na-akawanye njọ n’ihi na o chefuru iku ume, o meghị oghere n’akpa ya ka oxygen wee gabiga, o kudara ume mgbe a theụ ka dị ndụ. Nọmba 7 - Iche echiche Ighaghachi azụ Ọkwọ ụgbọala dị ize ndụ na ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịcheghị maka ha, ọbụlagodi dị mfe dị ka ịpasa ụgbọala
Otu nwanyị Australia chefuru otu ihe dị ịtụnanya banyere itinye ụgbọ ala ya n'ogige ahụ, nke tara ya nnukwu ego, yabụ kedu ka nke ahụ siri mee? Ọ na-aga ụlọ ahịa nri; ọ chọrọ ịhụ ma ọ nwere akpa rọba. Ya mere, ọ kwụsịrị, pụọ, chọọ ogwe ahụ, mana ọ bụ mmejọ. Ebe ọ bụ na ụgbọ ala ahụ anọghị n'ogige ahụ, ọ malitere ịlaghachi n'azụ ya dị ka ọ dị, na-akụda ya, na-agagharị na ya wee gbuo nwanyị ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na ọ kwadoghị ụbọchị ahụ n'ụzọ ahụ. Nọmba nke 6 - Egwuregwu karịrị n'ihi netwọọdụ brọdband ngwa ngwa ya zuru ebe niile, egwuregwu ịgba egwu na-ewu ewu na South Korea. A na-emeso ndị na-egwu egwuregwu na ndị ọkachamara na-eme egwuregwu ma na-akwụ ụgwọ dị ka kpakpando egwuregwu.
Ndị na-eme egwuregwu na-enweta nnukwu nkwado ma nwee ike ịme ihe karịrị $ 100,000 kwa afọ, agbanyeghị nke ahụ anaghị eme ma a bịa n'okwu Lee. Mgbe otu onye South Korea aha ya bụ Lee nwụrụ mgbe o kwusịrị igwu ihe ederede ntanetị ruo awa 50 na obere nkwụsịtụ ole na ole. Ọ dara mgbe ọ gwụchara egwuregwu na cafe ịntanetị na Taegu City.
O righị nri ma ọ bụ hie ụra n'oge oge marathon a, naanị nkwụsịtụ ọ na-ewere bụ ịga ụlọ mposi. Y’oburu n’ichoo nsogbu ya na mgbe ahu imara ebe ihe a na aga. Maka na ọ gwụchara awa iri ise ahụ n’achọghị ilebara ahụ ya anya, ọ nwụrụ.
Ndị dọkịta kwuru na ọ bụ ngwakọta nke nkụda mmụọ na ike ọgwụgwụ kpatara ọnwụ ya na mberede. Nọmba 5 - Lava Lamp Bomb Enwere ọtụtụ ụzọ iji chọọ ụlọ mma, mana oriọna na-adị ebe niile na ndị mmadụ n'otu n'otu, mana mgbe ị natara ma kpoo ha ọkụ na mbụ, enwere ụfọdụ iwu ịchọrọ ịgbaso, ọkachasị nwayọ. Philip Quinn dị afọ 24 na-etinye oriọna lava n'otu ọkụ ọkụ ka ọ nwụrụ mgbe ọ gbawara, na-ezipụ otu nnukwu iko n'ime obi ya.
Ndị nne na nna Philip Quinn hụrụ ozu ya na ụgbọala ya na-adọkpụ na Kent. Quinn kwuru na ọ zọrọ n'ime ime ụlọ ya mgbe oriọna ahụ gbawara, ebe ọ nwụrụ. Nọmba 4 - You Nụrụ Ihe Echiche bụ na ihe si n’eluigwe daa wee laa gị n’iyi abụghị ihe ọhụrụ; N’amaghị na ọ bụ helikọpta na-ada gị, agbanyeghị, ị chọghị ka e gbuo gị.
Ma, otu nwa akwụkwọ nọ n’ogbe ahụ nwụrụ na British Columbia mgbe helikọpta dara n’ala, gbuo ya. Ebum n’uche Ajụjụ a chọrọ ka azaa ebe a bụ ihe kpatara na ọ hụghị ma ọ bụ nụ ihe ọ bụla. Azịza ya bụ na ọ nọghị n'ụzọ ziri ezi, yana o nwekwara nnukwu olu isi na ya.
Ndị helikọpta ahụ nwụrụ anwụ, ihe niile merenụ jọgburu onwe ya. Otu ndụmọdụ ndị ndụmọdụ, etinyela ekweisi gị na olu zuru oke mgbe ị na-eje ije. Onu ogugu 3 - Nchacha Dika o dibu, mpio anwụrụ ọkụ abụghịzị akụkụ nke ụlọ na nka nka.
Nke a bụ n'ihi sistemụ kpo oku ọhụrụ, nke bụ ezigbo mmekpa ahụ mgbe ọ na - ehicha - Marko dị afọ laghachiri n'ụlọ nke aka ya wuo anwụrụ ọkụ. Ngwa nhicha. Thelọ anwụrụ ọkụ dị oke elu maka otu broom dị mfe, mana nke ahụ ga-ezuru ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike kegide ahịhịa ya na yinye wee jiri ihe buru ya ibu.
Ma gịnị ka ọ dị njikere iji dị ka ibu arọ? O nwere otu ihe dị mma ma kọmpat. Nke kachasị mma bụ na ejiri ọla kọpa mee ya ka ọ nwee ike ịgbado ya na yinye ahụ. N'ụzọ ụfọdụ, ọ ghaghị ileghara anya na ọ bụkwa bọmbụ aka ya ma jupụta ya na ihe mgbawa.
Marko gbanyere welder ya wee malite ịmepụta arc n'etiti grenade na yinye ahụ. Grenade ahụ gbawara ka ọla ahụ na-ekpo ọkụ. Ike nke mgbawa ahụ gburu ogbenye Marko ozugbo.
O cheghị echiche n’ezie gbasara atụmatụ ya. Nọmba 2 - Bignweta Nnukwu Nnukwu ikuku bụ njem dị egwu ebe ndị mmadụ na-eji ụgbọ mmiri gafee mmiri ma na-enweta oke ikuku mgbe ụfọdụ. Ikwesiri ile anya maka oke ikuku ikuku.
N'ụbọchị ikuku na-ekukarị, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ gwara ndị na-ahụ maka mmiri ka ha nọrọ n'oké osimiri mana ọtụtụ, gụnyere Adrian Monnoyeur, jụrụ, ya mere ha gara sọfụfụ. Mgbe ọ nọ na-egwu mmiri, a na-adọkpụ ya gafee oke osimiri n'ihe dịka kilomita 160 kwa elekere mgbe oke ebili mmiri buliri bọọdụ ya elu na mbara igwe. Adrian gbawara na Saint-Jean-de-.
Luz na ndịda ọdịda anyanwụ France. O tiri ozu ọtụtụ ụlọ, gụnyere nnukwu ụlọ nkwari akụ; Mgbe o mechara kewaa n'agha ya, ọ dara site na elu 15 m. A gaara ezere ya ma a sị na o gere ndị ọchịchị ntị.
obi dajụrụ ụda
Nọmba 1 - Nọrọ na Whengbọ Ala Mgbe ị na-aga njem safari, otu iwu kacha mkpa abụghị ịhapụ ụgbọ ala n'oge ọ bụla belụsọ ma a dụrụ gị ndụmọdụ ka ị mee nke ahụ; Nke a bụ maka nchekwa nke mmadụ na anụmanụ. Ma ndị okenye German njem nleta abụọ na njem nlegharị anya na Spain kpebiri na ha agaghị anụ ọtụtụ ịdọ aka na ntị a kesara na ogige safari wee pụọ n'ụgbọ ahụ wee nwee anụ ọhịa karịa. Ka ha si n'ụgbọala ahụ pụta, otu agụ wakporo ha ma gbuo ya.
Ebe ọ bụ na ha anaghị erube isi n’iwu ahụ, ihe ha ga-akwụ bụ maka ndụ ha. Nke a bụ nhọrọ anyị kachasị nzuzu nke ndị mmadụ nwụrụ. Gịnị ka unu niile na-eche banyere ya? Ka anyị mara na ihe.
Ugbu a enwere m ajụjụ maka gị! Chọrọ ịmalite ọwa youtube dị jụụ dị ka Nwee Amamihe? Chọkwara ihe Nweta ego mgbe ndị mmadụ na - ele gị edemede? Anyị nwere ike inyere gị aka! Maka ozi ndị ọzọ, lee njikọ dị na nkọwa nke edemede a. Nke a ewetara anyị na njedebe nke edemede a. Echefula ịpị bọtịnụ Dị ka, ịdenye aha ma gbanye mgbịrịgba ngosi ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla n'ime akụkọ ọhụrụ anyị.
Lee gị na ihe omume na-esote nke Amamihe!
Gịnị mere ndị igwe kwụ otu ebe na-ebu agbụ?
Isi ọrụ nke obere akpaagbụ bụiji jide n'aka na ị gaghị efu akpa gị. Ebe ọ bụ naigwe kwụ otu ebebụ ndị mbụ na-eyi ha, ha chọrọ ijide n'aka na obere akpa ha agaghị apụ apụ mgbe ha na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Na mgbakwunye, obere akpayinyena-egbochi izu ohi.Jul 20 2018 Nov.
Kedu ihe koodu biker pụtara?
IHEIKLỌ AKW BKWỌEji ya mee ihe niileEKIKEREEkekọrịta AKW AKWỌ KWES BR B, B ,GHSP AKWOKWỌCODENkwanye ugwu, IJI OBI, IWU, NA EGO NA-EKWU OKWU NA E WULERE ya. DN NA WOATETE A BIBLE NKYER THEKYER.CODE, Ọ D NEGH NE mkpa ka ihe dị otú ahụ.
Gịnị mere ndị na-agba ígwè ji egosi mkpịsị aka abụọ?
Ọtụtụ mgbe mgbe aọgba tum tumOnye na-agba ịnyịnya na-agba na-abụghị ụzọ, na-atụ akamkpịsị aka abụọ alabụ nanị ụzọ isi kwuo “hey” na ndị ọzọndị ọgba tum tum.
Gịnị mere ndị na-agba igwe nwere ụtarị na aka ha?
Nzaghachiụtarịbụ ihe nchebe onwe onye maka ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụrụ na hanwetabanye n'ọnọdụ dị ize ndụ, ebe ọ bụ na enwere ike iji ha dị ka ngwa ọgụ. Site na ịdọrọ alaihengwa ngwa ntọhapụ mgbachi, ha na-ngwa ngwa wepụrụ siogwe aka.
Gini mere ndi igwe ji ebu mma?
Fọdụigwe kwụ otu ebendị na-eme njem naanị ha na-ejikwa nke hammadịka ngwá ọrụ bara uru maka ụfọdụ ọnọdụ yana ọbụlagodi dị ka ngwa ọrụ nchebe oge ọ bụla ha zutere ihe egwu n'ụzọ ha. Â Ndịmmanabike ebunwere ike ịbụ otu ụdị, mpịachi, ma ọ bụ ọtụtụ ojiji dabere na mmasị onye ọ bụla.10.06.2013
Kedu ihe bụ mgbanaka mgbanaka O na ọgba tum tum?
AnMa ọ bụ-mgbanaka ọgba tum tumatụmatụMa ọ bụ-yiri mgbaakan'etiti mkpuchi ala na mkpuchi njikọ nke ọ bụlayinyenjikọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'okporo ụzọọgba tum tumdika ọ n keepschebeyinyeunyi n’efu.Ma ọ bụ-yiri mgbaakahụ na ụlọ ọrụ etinyere lube na-anọ na atụdo na n’etiti efere ahụ.11.09.2019
Kedu ihe mgbaàmà nsogbu ụwa na ọgba tum tum?
Ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ n'okporo ụzọ, na-efegharị aka ma na-eti mkpu mgbe niile bụ ihe na-egosi na enyemaka m nwere ike ịdị mkpa. N'ihe dị njọ, akara nhụjuanya zuru ụwa ọnụ nke ọtụtụ ndị maara, ndị na-anya ọgba tum tum ma ọ bụ na ọ bụghị, bụ atọ nke ihe ọ bụla. Okpu agha a wụlitere n'isi gị ugboro atọ bụ echiche.
You na-achọ okpu agha n’elu ala n’elu ọgba tum tum?
Ma ugbu a ị matara uru ịkwụsị ịkwụsị iji nyere onye na-agba ịnyịnya kwụsịrị, n'uche gị ị ga-amata na ị nwere ihe ị ga-enye ma e wezụga nkwado omume. Achọpụtaghị akara ngosi nke ọgba tum tum. Fọdụ kwenyere na okpu agha dị n'ala bụ ihe mgbaama. Ọtụtụ mmadụ amabeghị nke a, ma ọ bụ mmadụ ole na ole na-achọ okpu agha dị n'ala.
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji etinye okpu agha ha n'ala?
Ha na-adụ onye na-agba ya ọdụ ka ọ dọba okpu agha ahụ n’ala. Fọdụ na-eche na igirigi nke na-eme ka aka ya bụrụ ihe mgbaàmà maka enyemaka. Ndị ọzọ kwenyere na igwe kwụ otu ebe tụgharịrị na-eche ihu ntụzị aka ọ sitere [megide okporo ụzọ] bụ ihe mgbaàmà zuru ụwa ọnụ nke nsogbu. Ọtụtụ n'ime okwu a bụ mpaghara.